မီးဖိုခြောငျသုံးပစ်စညျးမြား နှငျ့ လကျတှအေ့သုံးခနြိုငျသော အကွံပေးလေးမြား - Home Decoration | iMyanmarHouse.com
9 Jun 2020 12:42 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
395 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
တိုးတကျနတေဲ့ခုလိုအခြိနျအခါမှာ အားလုံးသော လူတှဟော တိုးတကျနတေဲ့ အရာရာတိုငျး နဲ့အတူ အမွဲ ကိုယျ့ကို ကိုယျလဲ တိုးတကျအောငျလလေ့ာ နကွေရတာ အားလပျမှုဆိုတဲ့အခြိနျဟာအငျမတငျ ရှားပါးလာပါတယျ။ အလုပျလုပျနသေူကော အိမျမှာ ပဲနရေသူကော အားလုံး ကိုယျလုပျနတေဲ့နစေဉျလုပျနကွေအလုပျကို အမွဲတစေ လလေ့ာနိုငျမှ ကိုယျ့အတှကျ နစေ့ဉျအလုပျမှာအထောကျအကူ ဖွဈမှာပါ။
အိမျရှငျမ တှအေတှကျလဲနညျးလမျးသဈလေး တှေ လှယျကူတာလေး တှရှေိလာပါပွီ။ အခုဆိုရငျ မီးဖိုခြောငျအတှကျ အလှယျတကူ အသုံးပွုနိုငျတဲ့ မီးဖိုခြောငျပစ်စညျးတှလေဲဝယျယူသုံးစှဲလို့ရတော့ အရငျကလို ခေါငျးကိုကျ စရာမလိုတော့ပါဘူး။ မီးဖိုခြောငျအတှကျ လကျတှအေသုံးခနြိုငျသော နညျးအကွံပွု စာအုပျလေး ကိုရေးဖွဈတာကလဲ မစညျ ရဲ့ ဘဝမှာတှေ့ ကွုံဆုံခဲ့ရတဲ့ သူတှရေဲ့ မီးဖိုခြောငျ မှ အခကျအခဲလေးတှကေို အမွဲလိုလို ဝငျရောကျဖွရှေငျးပေးရငျးနဲ့ အဆငျပွသှေား ကွတာတှကေို အားလုံးအတှကျ အသုံးဝငျမယျလို့ထငျတာလေး တှကေိုပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါ။
မီးဖိုခြောငျမှာ ရှိသငျ့ ရှိထိုကျတာလေး မြားနှငျ့ အသုံးဝငျပုံ
Lock & Lock container လအေလုံ ပိတျလို့ရတဲ့ဘူး – ဘာကွောငျ့ အသုံးဝငျလဲ ? ဆိုဒျအစုံနဲ့ လအေလုံပိတျတဲ့ဘူးလေး တှပေျေါလာတာ တကယျပဲ အိမျရှငျမတှအေတှကျ ကယျတငျရှငျပါ။ အလုပျလုပျ တဲ့ အိမျရှငျမ တှေ၊ အိမျမှာလူဦးရမြေားတဲ့အိမျရှငျမတှအေတှကျ ဟငျးမြားမြားခကျြပွီးထညျခဲထားလို့ရတဲ့ဒီဘူးလေးတှေ ဟာအငျမတနျအထောကျအကူပွုပါတယျ။ ဟငျးကို မြားမြားခကျြပွီး တဈခါ စားလောကျလေး တှေ ဘူးထဲထညျ့ပွီး (Freezer) ထဲထညျ့ခဲ ထားခငျြးဖွငျ့ နတေို့ငျးဟငျးခကျြရတဲ့ အခြိနျလေးတှပေိုလာတော့ မုနျ့ဖုတျတာ တို့ရုပျရှငျကွညျ့တာတို့နဲ့အနားယူ လို့ရတာပေါ့ ။
စားခါ နညျးကွမှ မီးဖိုပျေါ ဒါမှမဟုတျ မိုကျကရိုဝေ့ ထဲ ထုပျနှေးလို့ ရသလို မနကျစားမယျ ဆိုညထဲက ရခေဲသတ်ေတာ အောကျထပျထဲ မှာ အရညျပြျော အောငျထားလို့လဲရပါတယျ။ ဟငျးတညျ့ရာမှာလဲလိုပါတယျ အခုလို ခဲထားမယျဆိုရငျ ဟငျးတုံးမြား ကို အရမျးနှုးအိနအေောငျ မတညျပါနဲ့။ ရအေနညျးငယျ ရောပွီး ပွနျနှေးလို့ရအောငျ လောကျထိပဲထားပါ။ ဟငျးခကျြလို့ခဲမယျဆိုလြှငျ ဟငျးကို အေးမှ ဘူးထဲ ထညျ့ပါ ပွီးမှ အလုံပိတျပွီး ဖရီဇာ(Freezer) ထဲ ထညျ့ခဲပါ။ ဘူးလေး တှမှော ဘာဟငျးထဲ့ခဲတာတယျဆိုတာ နဲ့ ဟငျးခကျြ တဲ့ရကျကို အမှတျအသားလေး နဲ့ ရေးပွီး ထားလြှငျပိုလို့တောငျလှယျကူ ပါတယျ။ ဘာဟငျးပွီး လြှငျ ဘာဟငျးစားလို့ရတယျ။ တပတျလုံး menu ကွိုရေးထားတဲ့သဘောပေ့ါ။
အခုလို ဟငျးကိုကွိုပွီးခကျြခဲထားတာကို တခြို့ ကမလတျဆကျဘူးလို့ ယူဆသလို အရသာ ပွောငျးသှားတယျလို့လဲခံယူထားသူတှေ ရှိပါတယျ။အခုလိုခဲတယျဆိုတာ ခကျြမယျ့ဟငျး နဲ့ ကိုယျခဲ ထားတဲ့အခြိနျပျေါမှုတညျ ပါတယျ။ ဟငျးခကျြ ပွီး မခဲခငျြဘူးဆိုရငျတော့ ဟငျးခကျြရငျ ထောကျအကူပွုနိုငျတဲ့ ကွကျသှနျ ဖွူ၊ ကွကျသှနျနီ၊ ခငျြး နဲ့ ငရုတျသီးခွောကျမှုနျ့ အားလုံးကို ကွိတျစကျညှကျတဲ့အထိ ရောကွိတျ တာပဲဖွဈဖွဈ (သို့) ထောငျးတာပဲဖွဈဖွဈ တပတျစာ လလေုံ (lock & lock) ဘူးထဲ ထညျ့ခဲ ထားလို့ရပါတယျ။ သုံးခါနညျး ၂ နာရီအလို လောကျအပွငျ မှာထားလိုကျလြှငျ ခကျြခငျြးထောငျးထားတဲ့ ကွကျသှနျဖွူ/နီ အတိုငျးလိုပဲ ရရှိပါတယျ။ ဟငျးခကျြခါနညျး ငရုတျ ကွကျသှနျထောငျးရတဲ့ အခြိနျကုနျစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဟငျးအနှဈကိုလဲ မြားမြားခကျြပွီး ခဲထားလို့ရသလို၊ အသီးအနှံတခြို့လညျး လတျဆကျတဲ့အရသာ မပကျြခဲထားလို့ရပါတယျ။
ဥပမာ – အုနျးသီး ဆိုရငျ မုနျ့အမွဲလုပျစားတတျ သူတှအေတှကျ အမွဲအသုံးဝငျနတောဆိုတော့လိုတဲ့အခြိနျ အုနျးသီး ဆိုငျသှားဝယျ နရေတဲ့အခြိနျရယျ အုနျးသီးခွဈရတဲ့အခြိနျတှေ မကုနျစရေနျ။ အုနျးသီး ကို မြားမြားလေးဝယျ ပွီး အဖတျကွီးကွီးလေးတှေ ခွဈထား ပွီး လလေုံဘူးလေးထဲထညျ့ခဲထားခငျြးဖွငျ့ လနဲ့ ခြီလိုသလို အသုံးခလြို့ရပါတယျ။
အခု နောကျပိုငျးအသဈထှကျလာတဲ့ ဖနျဘူး လလေုံဘူး (Lock & Lock) ကပို လို့တောငျကောငျးသေးတယျ။ အဖုံးဖှငျ့ပွီး တခါတညျး မိုကျကရိုဝထေဲ့နှေး ပွီး စားပှဲပျေါတနျးတငျ လို့ရတာကွောငျ့ အလုပျမရှုပျတော့ဘူးပေါ။ ဆေးကွောရတာ လဲလှယျကူတာကွောငျ့ အိမျမှာ ရှိသငျ့သော ပစ်စညျးလေးပါ။
အိမျမှာ ရှိသငျ့ သော ဓားမြား – (Knives)
စဖိုးမှုး knife (သို့)French knife လို့လဲချေါတဲ့ အရှညျ ၂၆၀ မီလီမီတာ (10 inches) knife ကို မီးဖိုခြောငျးတိုငျးမှာ အသုံးအမြားဆုံး နဲ့ အတှရေ့ဆုံး knife ပါ။ ခုတျတာ၊ ပိုငျးတာ၊ လှီးတာ၊ တုံးတာ စသညျဖွငျ့နရောတိုငျးလိုလို မှာ အသုံးပွုကွပါတယျ။ knife ရဲ့နောကျနား အထူက ပိုငျးဖို့ ခုတျဖို့ပါ၊ ရှပေို့ငျး knife ရဲ့အပါး က အနုစိတျတှေ အတှကျ သုံးဖို့ပါ။
အရိုးထှငျ knife Boning and Filleting က ထိတျခြှနျ ပွီး ပါးပါတယျ။ အရှညျ ကတော့ ၁၆၀ မီလီမီတာ (6 inches) ပါ။ အသားငါး မြား အရိုး ထှငျရာ တှငျ အသုံးပွုတာဖွဈပါတယျ။ ကွကျအကောငျ တကောငျလုံးကို ပုံမပကျြ အရိုးထှငျရာတှငျ သိပျအသုံးဝငျ သော knife ပါ။ ငါး ကွောရိုး မြားထှငျမယျဆိုရငျ တော့ knife ရဲ့ ထိပျဖြားလေးကို အသုံးပွုလြှငျ ပိုကောငျးပါတယျ။
အခှနျခှာ knife Paring knife ထိပျခြှနျခြှနျ လေး နဲ့ အရှညျက တော့ ၅၀ – ၁၀၀ မီလီမီတာ (2 –4inches) လောကျပဲ ရှညျပါတယျ။ အသီးအရှကျမြားကို အခှနျခှာရနျ ၊ မလိုတဲ့ နရောလေးတှေ လှီးထုပျရနျ လှယျကူ ပေါ့ပါး ပွီးသိပျကို အသုံးဝငျ သော knife ပါ။
လှသှား လို့ knife Serrated slicer knife ကလဲ slicer knife လို ပဲအရှညျ ကော အရှယျပါ ဒါပမေယျ့လှလို အသှားလေးတှပေါတာ ပဲကှဲခွားပါတယျ။သူ့ကို ပေါငျမှုနျ့ လှီးတာ၊ ကိတျမှုနျ့ လှီးတာ စသညျဖွငျ့ သုံးကွပါတယျ။
တရုတျဓါးမ Cleaver ကို ပုံ မွငျတာ နဲ့ သိနိုငျပါတယျ ဘာအတှကျလဲဆိုတာ။ အရိုး တှပေါ တခါတညျးခုတျလို့ရတာ ကွောငျ့ မီးဖိုခြောငျ သေးသေး ကွီးကွီး တှနေို့ငျပါတယျ။ လူတိုငျးအားရကနြေပျရတဲ့ knife ပါ။
စဉျ့နီတုံး – (cutting boards) အရှယျအစား သုံးမြိုးလောကျရှိသငျ့ပါတယျ။စဉျ့နီတုံး ဟာ လှီးမယျ၊ ခုတျမယျ ၊ ဖွတျမယျ ၊ တောကျမယျ စသညျ့ဖွငျ့ အရာတှမြေားပါတယျ။ အဲဒီ အထဲကမှ ကာလာခှဲပွီး cutting boards ကို သူ့ နရောနှငျ့ သူ သုံးသငျ့ပါတယျ။ ဆိုငျကွီး တှေ၊ ဟျောတယျ တှမှောတော့ color code နဲ့ ခှဲသုံး တာကို အတျောမြားမြားတှရေ့ပါ တယျ။
ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့အစားအစား နဲ့ ပတျသကျပွီးရရှိနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျနိုငျတဲ့ရောဂါ ပိုး (Cross-Contamination) ဥပမာ- အစာအဆိပျသငျ့ခငျြး ဒါမှမဟုတျ တခွား ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျနိုငျတဲ့ကူးစပျပိုးမှားမြား အစားအစား တဈခုမှနေ တဈခု သုံးစှဲနသေော ပစ်စညျးမြားမှ တဆငျ့ ကူးစပျနိုငျသောကွောငျ့သာဖွဈပါတယျ။
အစားအစား နှငျ့ ပတျသကျပွီး ကနျြးမားရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ရောဂါ တျောတျောမြားမြားအမြား ဆုံးဖွဈပျေါလာရဆုံး ကတော့ cutting board ကနေ အဖွဈမြားတာ ကို တှရေ့ပါတယျ လို့ International Health Organization က ဆိုထားပါတယျ… ဒါကွောငျ့မို့လို့ ကာလာ ခှဲ cutting boards မြား ကို သုံးသငျ့ပါတယျ။ အသားငါးအစိမျးလှီးလြှငျ တဈခု သကျသကျထားသငျ့ပါတယျ၊ အသီးအနှံမြား အတှကျ တဈခု နောကျပွီး ခကျြပွီး အစားအစာ လှီးရနျအတှကျ တဈခု အားလုံးပေါငျး အိမျသုံး cutting board သုံးခု လောကျဆို လုံလောကျပါတယျ။
ဟငျးအိုး နဲ့ ဒယျအိုး – အိုး ဝယျလြှငျ ဈေးကွီးတာ ကို ကွညျပွီး စိတျမပကျြပါနဲ့။ အိုး ကောငျးကောငျး နဲ့လေးတာကို ဈေးကွီးပေးဝယျရ လို့ ခေါငျးကိုကျမိသလိုဖွဈခငျြ ဖွဈပါလိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ ဟငျးခကျြတဲ့အခါအလှယျတကူ နဲ့ အိုးမကပျမတူးပဲခကျြနိုငျရငျ အဲဒီခေါငျးကိုကျတာ ပွောကျသှားပါလိမျ့မယျ။
ဟငျးအိုးဒယျအိုး ဝယျတဲ့အခါ သဈသား၊ ပလတျစတဈ လကျကိုငျတို့ ကိုမဝယျသငျ့ပါဘူး။ အာဗငျထဲကို ထညျ့ပွီး ကငျတဲ့အခါ အခကျအခဲ ရှိနိုငျသလို သဈသားကအလှယျ တကူ လောငျကြှမျးနိုငျသလို ပလတျစတဈ လကျကိုငျ ရရှေညျသုံးလြှငျ အရညျပြျောလာနိုငျသော ကွောငျ့ပါ။ နာမညျကွီး သော ဟငျးအိုးဒယျအိုးမြားဟာ ဈေးကွီးပမေယျ့ တသကျတာ အသုံးခံတာကွောငျ့ကိုယျ့အတှကျ သငျ့တျောသော အရှယျအစား အိုး နဲ့ဒယျအိုး မြားကို ကိုယျ့အတှကျ နစေ့ဉျဟငျးကောငျးတခှကျရရှိဖို့ အတှကျ ရငျးနှီမွုပျနှံသငျ့ပါတယျ။
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ နှင့် လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သော အကြံပေးလေးများ
တိုးတက်နေတဲ့ခုလိုအချိန်အခါမှာ အားလုံးသော လူတွေဟာ တိုးတက်နေတဲ့ အရာရာတိုင်း နဲ့အတူ အမြဲ ကိုယ့်ကို ကိုယ်လဲ တိုးတက်အောင်လေ့လာ နေကြရတာ အားလပ်မှုဆိုတဲ့အချိန်ဟာအင်မတင် ရှားပါးလာပါတယ်။ အလုပ်လုပ်နေသူကော အိမ်မှာ ပဲနေရသူကော အားလုံး ကိုယ်လုပ်နေတဲ့နေစဉ်လုပ်နေကြအလုပ်ကို အမြဲတစေ လေ့လာနိုင်မှ ကိုယ့်အတွက် နေ့စဉ်အလုပ်မှာအထောက်အကူ ဖြစ်မှာပါ။
အိမ်ရှင်မ တွေအတွက်လဲနည်းလမ်းသစ်လေး တွေ လွယ်ကူတာလေး တွေရှိလာပါပြီ။ အခုဆိုရင် မီးဖိုချောင်အတွက် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းတွေလဲဝယ်ယူသုံးစွဲလို့ရတော့ အရင်ကလို ခေါင်းကိုက် စရာမလိုတော့ပါဘူး။ မီးဖိုချောင်အတွက် လက်တွေအသုံးချနိုင်သော နည်းအကြံပြု စာအုပ်လေး ကိုရေးဖြစ်တာကလဲ မစည် ရဲ့ ဘဝမှာတွေ့ ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့ သူတွေရဲ့ မီးဖိုချောင် မှ အခက်အခဲလေးတွေကို အမြဲလိုလို ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးရင်းနဲ့ အဆင်ပြေသွား ကြတာတွေကို အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တာလေး တွေကိုပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါ။
မီးဖိုချောင်မှာ ရှိသင့် ရှိထိုက်တာလေး များနှင့် အသုံးဝင်ပုံ
Lock & Lock container လေအလုံ ပိတ်လို့ရတဲ့ဘူး – ဘာကြောင့် အသုံးဝင်လဲ ? ဆိုဒ်အစုံနဲ့ လေအလုံပိတ်တဲ့ဘူးလေး တွေပေါ်လာတာ တကယ်ပဲ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ကယ်တင်ရှင်ပါ။ အလုပ်လုပ် တဲ့ အိမ်ရှင်မ တွေ၊ အိမ်မှာလူဦးရေများတဲ့အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ဟင်းများများချက်ပြီးထည်ခဲထားလို့ရတဲ့ဒီဘူးလေးတွေ ဟာအင်မတန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဟင်းကို များများချက်ပြီး တစ်ခါ စားလောက်လေး တွေ ဘူးထဲထည့်ပြီး (Freezer) ထဲထည့်ခဲ ထားချင်းဖြင့် နေ့တိုင်းဟင်းချက်ရတဲ့ အချိန်လေးတွေပိုလာတော့ မုန့်ဖုတ်တာ တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့နဲ့အနားယူ လို့ရတာပေါ့ ။
စားခါ နည်းကြမှ မီးဖိုပေါ် ဒါမှမဟုတ် မိုက်ကရိုဝေ့ ထဲ ထုပ်နွေးလို့ ရသလို မနက်စားမယ် ဆိုညထဲက ရေခဲသေတ္တာ အောက်ထပ်ထဲ မှာ အရည်ပျော် အောင်ထားလို့လဲရပါတယ်။ ဟင်းတည့်ရာမှာလဲလိုပါတယ် အခုလို ခဲထားမယ်ဆိုရင် ဟင်းတုံးများ ကို အရမ်းနှုးအိနေအောင် မတည်ပါနဲ့။ ရေအနည်းငယ် ရောပြီး ပြန်နွေးလို့ရအောင် လောက်ထိပဲထားပါ။ ဟင်းချက်လို့ခဲမယ်ဆိုလျှင် ဟင်းကို အေးမှ ဘူးထဲ ထည့်ပါ ပြီးမှ အလုံပိတ်ပြီး ဖရီဇာ(Freezer) ထဲ ထည့်ခဲပါ။ ဘူးလေး တွေမှာ ဘာဟင်းထဲ့ခဲတာတယ်ဆိုတာ နဲ့ ဟင်းချက် တဲ့ရက်ကို အမှတ်အသားလေး နဲ့ ရေးပြီး ထားလျှင်ပိုလို့တောင်လွယ်ကူ ပါတယ်။ ဘာဟင်းပြီး လျှင် ဘာဟင်းစားလို့ရတယ်။ တပတ်လုံး menu ကြိုရေးထားတဲ့သဘောပေ့ါ။
အခုလို ဟင်းကိုကြိုပြီးချက်ခဲထားတာကို တချို့ ကမလတ်ဆက်ဘူးလို့ ယူဆသလို အရသာ ပြောင်းသွားတယ်လို့လဲခံယူထားသူတွေ ရှိပါတယ်။အခုလိုခဲတယ်ဆိုတာ ချက်မယ့်ဟင်း နဲ့ ကိုယ်ခဲ ထားတဲ့အချိန်ပေါ်မှုတည် ပါတယ်။ ဟင်းချက် ပြီး မခဲချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဟင်းချက်ရင် ထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ ကြက်သွန် ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ချင်း နဲ့ ငရုတ်သီးခြောက်မှုန့် အားလုံးကို ကြိတ်စက်ညှက်တဲ့အထိ ရောကြိတ် တာပဲဖြစ်ဖြစ် (သို့) ထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် တပတ်စာ လေလုံ (lock & lock) ဘူးထဲ ထည့်ခဲ ထားလို့ရပါတယ်။ သုံးခါနည်း ၂ နာရီအလို လောက်အပြင် မှာထားလိုက်လျှင် ချက်ချင်းထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ အတိုင်းလိုပဲ ရရှိပါတယ်။ ဟင်းချက်ခါနည်း ငရုတ် ကြက်သွန်ထောင်းရတဲ့ အချိန်ကုန်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဟင်းအနှစ်ကိုလဲ များများချက်ပြီး ခဲထားလို့ရသလို၊ အသီးအနှံတချို့လည်း လတ်ဆက်တဲ့အရသာ မပျက်ခဲထားလို့ရပါတယ်။
ဥပမာ – အုန်းသီး ဆိုရင် မုန့်အမြဲလုပ်စားတတ် သူတွေအတွက် အမြဲအသုံးဝင်နေတာဆိုတော့လိုတဲ့အချိန် အုန်းသီး ဆိုင်သွားဝယ် နေရတဲ့အချိန်ရယ် အုန်းသီးခြစ်ရတဲ့အချိန်တွေ မကုန်စေရန်။ အုန်းသီး ကို များများလေးဝယ် ပြီး အဖတ်ကြီးကြီးလေးတွေ ခြစ်ထား ပြီး လေလုံဘူးလေးထဲထည့်ခဲထားချင်းဖြင့် လနဲ့ ချီလိုသလို အသုံးချလို့ရပါတယ်။
အခု နောက်ပိုင်းအသစ်ထွက်လာတဲ့ ဖန်ဘူး လေလုံဘူး (Lock & Lock) ကပို လို့တောင်ကောင်းသေးတယ်။ အဖုံးဖွင့်ပြီး တခါတည်း မိုက်ကရိုဝေ့ထဲနွေး ပြီး စားပွဲပေါ်တန်းတင် လို့ရတာကြောင့် အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ။ ဆေးကြောရတာ လဲလွယ်ကူတာကြောင့် အိမ်မှာ ရှိသင့်သော ပစ္စည်းလေးပါ။
အိမ်မှာ ရှိသင့် သော ဓားများ – (Knives)
စဖိုးမှုး knife (သို့)French knife လို့လဲခေါ်တဲ့ အရှည် ၂၆၀ မီလီမီတာ (10 inches) knife ကို မီးဖိုချောင်းတိုင်းမှာ အသုံးအများဆုံး နဲ့ အတွေ့ရဆုံး knife ပါ။ ခုတ်တာ၊ ပိုင်းတာ၊ လှီးတာ၊ တုံးတာ စသည်ဖြင့်နေရာတိုင်းလိုလို မှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ knife ရဲ့နောက်နား အထူက ပိုင်းဖို့ ခုတ်ဖို့ပါ၊ ရှေ့ပိုင်း knife ရဲ့အပါး က အနုစိတ်တွေ အတွက် သုံးဖို့ပါ။
အရိုးထွင် knife Boning and Filleting က ထိတ်ချွန် ပြီး ပါးပါတယ်။ အရှည် ကတော့ ၁၆၀ မီလီမီတာ (6 inches) ပါ။ အသားငါး များ အရိုး ထွင်ရာ တွင် အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်အကောင် တကောင်လုံးကို ပုံမပျက် အရိုးထွင်ရာတွင် သိပ်အသုံးဝင် သော knife ပါ။ ငါး ကြောရိုး များထွင်မယ်ဆိုရင် တော့ knife ရဲ့ ထိပ်ဖျားလေးကို အသုံးပြုလျှင် ပိုကောင်းပါတယ်။
အခွန်ခွာ knife Paring knife ထိပ်ချွန်ချွန် လေး နဲ့ အရှည်က တော့ ၅၀ – ၁၀၀ မီလီမီတာ (2 –4inches) လောက်ပဲ ရှည်ပါတယ်။ အသီးအရွက်များကို အခွန်ခွာရန် ၊ မလိုတဲ့ နေရာလေးတွေ လှီးထုပ်ရန် လွယ်ကူ ပေါ့ပါး ပြီးသိပ်ကို အသုံးဝင် သော knife ပါ။
လွှသွား လို့ knife Serrated slicer knife ကလဲ slicer knife လို ပဲအရှည် ကော အရွယ်ပါ ဒါပေမယ့်လွှလို အသွားလေးတွေပါတာ ပဲကွဲခြားပါတယ်။သူ့ကို ပေါင်မှုန့် လှီးတာ၊ ကိတ်မှုန့် လှီးတာ စသည်ဖြင့် သုံးကြပါတယ်။
တရုတ်ဓါးမ Cleaver ကို ပုံ မြင်တာ နဲ့ သိနိုင်ပါတယ် ဘာအတွက်လဲဆိုတာ။ အရိုး တွေပါ တခါတည်းခုတ်လို့ရတာ ကြောင့် မီးဖိုချောင် သေးသေး ကြီးကြီး တွေ့နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းအားရကျေနပ်ရတဲ့ knife ပါ။
စဥ့်နီတုံး – (cutting boards) အရွယ်အစား သုံးမျိုးလောက်ရှိသင့်ပါတယ်။စဥ့်နီတုံး ဟာ လှီးမယ်၊ ခုတ်မယ် ၊ ဖြတ်မယ် ၊ တောက်မယ် စသည့်ဖြင့် အရာတွေများပါတယ်။ အဲဒီ အထဲကမှ ကာလာခွဲပြီး cutting boards ကို သူ့ နေရာနှင့် သူ သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆိုင်ကြီး တွေ၊ ဟော်တယ် တွေမှာတော့ color code နဲ့ ခွဲသုံး တာကို အတော်များများတွေ့ရပါ တယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့အစားအစား နဲ့ ပတ်သက်ပြီးရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ရောဂါ ပိုး (Cross-Contamination) ဥပမာ- အစာအဆိပ်သင့်ချင်း ဒါမှမဟုတ် တခြား ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ကူးစပ်ပိုးမွှားများ အစားအစား တစ်ခုမှနေ တစ်ခု သုံးစွဲနေသော ပစ္စည်းများမှ တဆင့် ကူးစပ်နိုင်သောကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။
အစားအစား နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမားရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ရောဂါ တော်တော်များများအများ ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာရဆုံး ကတော့ cutting board ကနေ အဖြစ်များတာ ကို တွေ့ရပါတယ် လို့ International Health Organization က ဆိုထားပါတယ်… ဒါကြောင့်မို့လို့ ကာလာ ခွဲ cutting boards များ ကို သုံးသင့်ပါတယ်။ အသားငါးအစိမ်းလှီးလျှင် တစ်ခု သက်သက်ထားသင့်ပါတယ်၊ အသီးအနှံများ အတွက် တစ်ခု နောက်ပြီး ချက်ပြီး အစားအစာ လှီးရန်အတွက် တစ်ခု အားလုံးပေါင်း အိမ်သုံး cutting board သုံးခု လောက်ဆို လုံလောက်ပါတယ်။
ဟင်းအိုး နဲ့ ဒယ်အိုး – အိုး ဝယ်လျှင် ဈေးကြီးတာ ကို ကြည်ပြီး စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ အိုး ကောင်းကောင်း နဲ့လေးတာကို ဈေးကြီးပေးဝယ်ရ လို့ ခေါင်းကိုက်မိသလိုဖြစ်ချင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ဟင်းချက်တဲ့အခါအလွယ်တကူ နဲ့ အိုးမကပ်မတူးပဲချက်နိုင်ရင် အဲဒီခေါင်းကိုက်တာ ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဟင်းအိုးဒယ်အိုး ဝယ်တဲ့အခါ သစ်သား၊ ပလတ်စတစ် လက်ကိုင်တို့ ကိုမဝယ်သင့်ပါဘူး။ အာဗင်ထဲကို ထည့်ပြီး ကင်တဲ့အခါ အခက်အခဲ ရှိနိုင်သလို သစ်သားကအလွယ် တကူ လောင်ကျွမ်းနိုင်သလို ပလတ်စတစ် လက်ကိုင် ရေရှည်သုံးလျှင် အရည်ပျော်လာနိုင်သော ကြောင့်ပါ။ နာမည်ကြီး သော ဟင်းအိုးဒယ်အိုးများဟာ ဈေးကြီးပေမယ့် တသက်တာ အသုံးခံတာကြောင့်ကိုယ့်အတွက် သင့်တော်သော အရွယ်အစား အိုး နဲ့ဒယ်အိုး များကို ကိုယ့်အတွက် နေ့စဉ်ဟင်းကောင်းတခွက်ရရှိဖို့ အတွက် ရင်းနှီမြုပ်နှံသင့်ပါတယ်။
ကြည့်မြင်တိုင် 25'50' ပထမထပ် အငှါး (400000)
တကိုယ်လုးံချွတ်ပီးပြတယ် video callနဲ့ Mptဘေ3000ရရင်
ထားဝယ် | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
မန်တလေးမွို့ အိမျအငှား(Code No.655) 26လမျး 73လမျးအနီး...